Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): November 2012
Gamung nau ra
at 11/30/2012 10:47:00 AM
Myitrum manang ni, daini gaw Ga shagawpamalai 1/10 hkungga Gamung Naura langai shagun dat ai. KK gaw, shi hpe kam sham ai ni hpe sut su shangun mayu ai wa re.
Shiga gaw, mani 29.11.2012 hta Nam San Yang de M grai anin lung wa ai majaw, bom bai hkan jat hkai hkawm ai; bom sara Lazing Dut ( Mungshawa Hpyenla) kapaw si mat ai lam na lu ai. Ningrum ningtau jan n nga mat ai na sai re; ya kasha jawngma2chyahkrai taw sai lam chye lu ai. Kyu hpyi dum ya ga yaw. Manmaw lam Dawhpum- Yang kaw M hpyenla wa dabak matsut taw nga ai majaw, gat num ni lai wa lai sa yak nga ma ai lam na chye lu ai.
I ama100% Kachin, Christian but I shed tears when I first saw the photo of the monks worshiping the policemen on the ground,
at 11/30/2012 02:54:00 AM
Khon Ja and4other friends shared ဝါးလုံးရှည် အတီး's photo.
ဖော့စဖိတ် ပါဝင်တဲ့ လက်ပစ်ဗုံး phosphorus genrade ဆိုတာက ဓာတုဗေဒ လက်နက် အမျိုးအစားမှာပါဝင်ပြီး ပေါက်ကွဲမှူအနီးအနားမှာရှိတဲ့ လူနဲ့ ရေဓာတ်ပါတဲ့ စိုစွတ်တဲ့ အရာတွေကို
မီးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာမျိုးပါ။ ဒီလက်နက်မျိုးကို ဒုကမ္ဘာစစ် အတွင်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် မန္တလေး မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေက ဂျပန်တပ်တွေ ကို ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှ ရက်စက်လှပြီး ခံစားရသူကို သေရာပါ ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်များစွဲကပ်စေကာ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာများအဖြစ် အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ် ရောဂါများပါ ရရှိနိုင်စေပါတယ်။မြန်မာမြေပေါ်မှာသာ အထူးအဆန်း အနေနဲ့ ဖြစ်နေပေမဲ့ တကယ်တော့ ဒီလက်နက်မျိုးဟာ ပါလက်စတိုင်းဒေသမှာ အစ္စရေးတပ်များက အသုံးပြုနေကြ သာမန်ရိုးကျ လက်နက် တခုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။အမေရိကန်တပ်များကော၊ အစ္စရေးတပ်များပါ လက်ရှိဆင်နွှဲနေကြစစ်ပွဲမျိုးမှာ လူမသိ သူမသိကော ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပါ အသုံးပြုနေကြတာမျိုးပါ။ လတ်တလော အနေအထားကြည့်ပြီး အသေအပျောက် စာရင်းမများလှလို့ သိပ်မပြင်းထန်ဘူးလို့ ထင်ရပေမဲ့လဲ နောက်ပိုင်း နာတာရှည် ရောဂါများရရှိပြီး လူညွန့်ပါတုံးစေနိုင်တဲ့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရက်စက်နိုင်တဲ့လက်နက်တမျိုးပါပဲ။ သို့ပေမဲ့လဲ ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှ စစ်ပွဲတွေမှာပဲ သုံးကြပြီး ဒီလို သာမန် ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ မသုံးခဲ့ပါ။ သုံးခွင့်လဲမရှိပါ။ဆရာထက် တပည့်လက်ဇောင်းထက်ဆိုသလို ကျောင်းသားတွေကို ရီကွိုင်ဂန်းနဲ့ပစ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းထက် လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်ဒီမိုကရေစီ အစိုးရက အပုံကြီးသာသွားပါပြီ။ ကောင်းပြီ၊ ကချင်စစ်ပွဲတွေကို မရပ်နိုင်ဘူး။ စစ်တပ်ကို စွပ်ဖက်လို့မရပါဘူးလို့ ငြင်းဆန်လို့ ရကောင်းရနိုင်ပေမဲ့ ဒီလို ပြည်တွင်းကဆန္ဒပြပွဲ တွေကိုတော့ သမ္မတကြီး တာဝန်မရှိပါဘူးလို့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းလို့ မရလောက်ပါဘူးနော်။ မျက်ရည်ယို ဗုံးလောက်ပါဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်ဖို့လဲ မကြိုးစားပါနဲ့တော့။ မျက်ရည်ယိုဗုံး ရဲ့ အရသာကို ကျွန်တော် အပါအဝင် ပြည်သူများ၊ သံဃာတော်အများအပြား ကပါ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်မှာတုန်းက ကောင်းကောင်းကြီးမြည်းစမ်းဖူးခဲ့ပြီးပါပြီ။ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ မီးလောင်ဗုံးဟာ အတော်ကွာခြားမှန်း ကာယကံရှင် များရဲ့ သေရာပါ ဒဏ်ရာ များက သက်သေခံသွားပါပြီ။
Khon Ja shared ဝါးလုံးရှည် အတီး's photo.
I ama100% Kachin, Christian but I shed tears when I first saw the photo of the monks worshiping the policemen on the ground, as I know how the monks are valued in traditional Myanmar Buddhist society. Today, those monks are burned alive by the people who share the same religion and came from the same race. In 2007 the monks are killed in the same way as today... What the hell is that? How can I understand Myanmar or Burma?? and What is the use of Peace Princess as she even could not condemn this kind of violation to the monks???
at 11/29/2012 07:49:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကို မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
လူတစ်ယောက်ရပ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ တူနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
တဆက်ထဲမှာဘဲ...အဲဒီလူဆီမှာ မတူတဲ့ ဒဏ်ရာ၊
ဦးစွာ အဲဒီလဲူရဲ့ ခေါင်းပိုင်းမှာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော် ပေါက်နေတဲ့
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကချင်ပြည်မှာ စစ်တိုက်နေလို့ပေါ့။
ပြီးရင်.... အဲဒီလူရဲ့ နံရိုးတွေကျိုးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ
နောက်ပြီး...အဲဒီလူဟာ အစာအိမ်ရောဂါရနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..
ဘာကြောင့်ဆိုရင် ရွှေဘိုငလျင်လှုပ်လို့ ဗမာတွေ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေပြီး
ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့်လည်း ဗမာတွေ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေကြပြန်ရော။
နောက်တစ်ခုက... အဲဒီလူဟာ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ မောဟိုက်နေတယ်။
နေပြည်တော်ရဲ့ စီးပွားရေးက အနုတ်လက္ခဏာဆောင်နေလို့ ငွေတွေ ချေးငှားနေရတယ်။
ခက်တာတစ်ခုက.... ရန်ကုန်မှာ အိုဘားမားလာသွားခဲ့တုန်းက "Psycho"
၀င်လောက်တဲ့ မိန့်ခွန်းချွေပြီး ကောင်းကောင်းဆော်သွားတာဘဲ...ရန်ကုန်က
မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့...မိတ်ဆွေ.... မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ.........
at 11/29/2012 07:48:00 PM
ကချင်ပြည်မှာ ဗမာစစ်သားတွေက လူထုကို အကာအကွယ်ယူပြီး ကချင်စစ်တပ်ကို
ကချင်စစ်သားတွေကတော့ ဘုရားသခင်ဆုတောင်းသံကို ယုံကြည်အားကိုးပြီး
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ လွတ်တော်မှာ ဆဲဆိုတဲ့စကားတွေကို တားမြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်နေကြပြီ။
ဗမာနိုင်ငံရှိ တပ် မတော်သားများ ၂၅ % ပါဝင်နေတဲ့ လွှတ်တော်မှာတော့
ဗမာစစ်သားတွေ တပ်တွင်းမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုလိုပြောနေကြတဲ့ "လီးဘဲ၊
ငါလိုးမသားကောင်" စတဲ့ စကားလုံးတွေအတွက်ထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်တာ မရှိသေးပါ။
Watch this video to “Jingle Bell Rock” with Hot Chelle Rae. Then rockadeal here:
at 11/29/2012 11:09:00 AM
Madang Dep Ai La
at 11/29/2012 10:18:00 AM
Myitrum manang ni, “Madang Dep Ai La” ngu ai Ga shagawp gawp shagun dat ai. Mani 28.11.2012,9:00AM hta Sammung Nawngtau maga, Dung 8, Hpaikawng ngu ai Sam Kahtawngegasat poi hkring mi byin ai; (KIA ni hkap gap na masa nga ai) shani M ni bai hkan tam yang KIA hpe n mu ai majaw, masin pawt nna, kahtawng masha ni hpe Nawku jawngegawt bang da ai; grai pawt let, “ Sat kau na” ngu hkrim ma ai da. 3:30PM hta gaw, M ni masin shakawp, Hpaikawng hpyen-yen htinggaw 50-60 nga ai dabang nat bang wa ai; jan du lup re ai, Kyu hpyi dum mi nga nna, sarama langai shana wa ai. Ndai shiga na ai ni yawng, kyu hpyi dum dat ga lu oi.
Adam gaw Ewa hpe yu,
Nyeaashan re ngu mu;
Nyeanra na nra,
Ewa gaw ngai she rai nga.
Ewa hpe yu dat shagu,
Nyeasalum ngu she mu;
Karai Kasang hpan shalat,
Ningrum ningtau ngu masat.
Adam hkrai sha shi shingtai,
Manang n lu garen ai;
Yehowa dik hkra chye na,
Ewa hpe special hpan da.
Adam nachying wa tsaw ra,
Galoi tim nja nhpra;
Adup zingri mazut lai,
Adam galoi n di ai.
Daini Adam matu ni,
Num ma hpe n chye lali;
Majoi kam ai hku roi rip,
Adup zingri chye shakrip.
Num ma hpe manu n tawn,
Kunrai hku mung she zawn nawn;
Prat dep myu shayi ni hkrai,
Mazut roi rip ninghkap sai.
Nhtoi 26, November,
Myushayi ni ga shaga;
M’dang dep la ni matsing da,
N dep ai ni Gwi Manya ! ! !
¬ “Violence Against Women Day” hpe myit dum let,
Burmese army steps up its shelling campaign
at 11/29/2012 10:15:00 AM
November 29, 2012 post by Kachin L
Despite government’s claims to the contrary, Burmese army continued shelling KIA posts and residential areas with heavy artilleries. Local Kachin sources reported that Burmese army’s 321st LIB, which is currently based at Npawn village’s prayer mountain, fired2rounds of 81mm mortar shells to KIA’s Gang Dau Du post on Nov 26. On the same day, Burmese army’s 416th LIB, currently stationed at Lahpai village, fired several rounds of 81 mm mortar to KIA’s Ngau Lay post and Bum Sen post.
Burmese army’s 10th LIR stationed at Sadone Hospital hill reportedly fired several rounds of heavy artillery mortar shells to Kung Pau hill on Nov 26, saidafrontline source.
Continuous and heavy artillery shelling of 81 mm mortar on several KIA posts at Pangwa, border no. 6, Hkai Tawng Hkahku, Lagat Kawng, Lapum bum and Kamu Na have been reported on Nov 23 and Nov 24. Burmese army shelling on KIA posts have escalated toanew level in KIA’s 1st, 2nd and 5th Brigade areas in recent days.
Earlier this month, Burmese army unit stationed at Hpakant Byuha Kone fired 120mm mortar shells on Laqmawng village and Mawmau hill for 24 times killing two Kachin civilians. Another three civilians, Sam La (age 50), Marip Naw Mai (age 12) and Marip Doi La (age 8) were wounded by the mortar shells.
While officials of quasi-civilian government backed by Burmese army often defended the nature of its military offenses to indigenous population in Kachin and northern Shan state as defensive operations, frontline government soldiers continued to relentlessly fire heavy artillery shells on KIA posts and Kachin civilians.
By: Jade Land fB
တကယ်တော့ မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းမှာလဲ ကေအိုင်အိုလို ပြည်သူ့ဘက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တဲ့၊ တရုတ်ကိုမကြောက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလိုနေတယ်..။
at 11/29/2012 10:08:00 AM
by/Zaw Khun Naw
မြစ်ဆုံတမံရုံးဗုံးခွဲမှုနဲ့ စွတ်စွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကချင်လူငယ်တွေကို ဘယ်သူမှ သတိမရကြဘူး..။
့်မယ်လို့ ကေအိုင်အိုဥက္ကဋ္ဌကနေ သမ္မတဟူဆီ တရားဝင်စာပို့တာ ဘယ်သူမှ မမြင်ကြဘူး..။
တရုတ်ဘက်ခြမ်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ နှင်ထုတ်လို့၊ မိုးကုန်အောင်တောင် မစောင့်နိုင်ဘ
ဲ ချက်ချင်း ဒီဘက်ကမ်း ပြန်ခေါ်ထားရတာ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်မိကြဘူး..။
ကေအိုင်အိုကို တရုတ်တွေက လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ပဲ ပြောနေကြတယ်..။
ဥပမာ ဒေသခံစစ်တပ်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စီမံကိန်းဆက်လုပ်ရင် ဗဟိုအစိုးရကို တော်လှန်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ဆင်နွှဲရလိမ့်မယ်စသဖြင် လုပ်လိုက်ရင် စီမံကိန်း ရပ်သွားနိုင်တယ်..။ ဗိုလ်မှူးဗထူးတောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို တော်လှန်ပြီး၊ မတ် ၂၇ မတိုင်မီ ဖက်ဆစ်ကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ အခုဆို ဗထူးတပ်မြို့လို့တောင် ဂုဏ်ပြုခံထားရတာပဲ..။ ဗမာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေ ဘာကြောက်နေကြတာလဲ..။ သွေးမရှိဘူးလား..။
At LSE forum, when asked byaKachin Student why she was reluctant to denounce the government's ongoing offensive against ethnic Kachins, Aung San Suu Kyi replied "I denounce all violence"
at 11/29/2012 09:55:00 AM
Khin Mgoo shared Chit Coco's photo.
At LSE forum, when asked byaKachin Student why she was reluctant to denounce the government's ongoing offensive against ethnic Kachins, Aung San Suu Kyi replied "I denounce all violence". Now Thein Sein's goverment is using brutal forces to crack down the peaceful protest by the farmers and monks. Let's see if Aung San Suu Kyi, the Nobel Peace Laureate, will publicly denounce Thein Sein government or not.
President Thein Sein's Troops burned and destroyed the demonstrators' anti-mining protest camps in central Burma
at 11/29/2012 09:36:00 AM
Myanmar Crackdown on Protestors use tear bomb,
Khin Mgoo shared Eleven Media Group's photo.
သက်တော် ၆၀ ၊ သိက္ခာတော် ၄၂ ၀ါ ရှိ မုံရွာ မှ ဦဇင်း သုမလ မီးလောင်းဗုံး
ကြောင့် ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရ
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ကို ဒီနေ့နံနက် လင်းအားကြီး အချိန် မှာ
မျက်ရယ်ယို ဗုံး တွေ ၊ မီးလောင်ဗုံး တွေ ၊ မီးသတ် ပိုက် တွေ သုံး ပြီး ဖြို ခွဲခဲ့ ပါတယ်။ ဆန္ဒပြ သပိတ် ခေါင်းဆောင် တွေ ဟာ ယင်းမာပင် ၊ ပုလဲ နဲ့ဖောင်
ကား ဘက်က ရွာ တွေ ထိ ထွက် ပြေး ခဲ့ ရပါတယ်။ ဆန္ဒပြ ပွဲ မှာ သံဃာ
တော် တွေ ကို ဦးဆောင် ခဲ့ သူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်း ဦးသု မလ က တော့
မီးလောင်းဗုံး ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရ ခဲ့ လို့ဘေးနား က ရွာတစ်ရွာ မှာ
ခေတ္တ ခို လှုံ နေ ရ ပါတယ်။ ထွက်မ ပြေး ဘဲ နေတဲ့ သူ တွေ ကို ဖမ်းထား
တယ် လို့ဖောင်ကား ကို ရောက် လာ တဲ့ ၀ှက်မှေး ကျေးရွာသား သာ ကို
နိုင် က FNG ကို ပြောပါတယ်။
နံနက် ၃ နာရီ လောက် မှာအင်အား ခြောက်ရာ ကျော် လောက် ရှိ တဲ့ လုံ ထိန်း တွေ ဟာ တောင် ခြေ က သပိတ် စခန်း ကို စတင် ဖြို ခွဲ ပြီး နောက်
မှာ ၀မ်ပေါင် စီမံ ကိန်း ကို ၀င် တဲ့ တောင်ကြား သပိတ် စခန်း နှစ် ခု ကို
တော့ မီးလောင်း ဗုံး တွေ ပစ် ထည့် ပြီး အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reforming Burma for the "kleptokraptic military capitalism" which is designed to thieve what belongs to the public, rob the country of anything of value and rape the Environment for profit:
From Soe Myint Aung's FB:
Demonstration Camps are Destroyed at Night Time without Any Ambulance nor Doctor Prepared
Starting from 3:15, riot police destroyed six demonstration camps using fire engine and tear gas. There are injuries sustained from tear gas and running in the dark at night time.
So far, 11 demonstrators from two of six demonstration camps are injured. The demonstration camps cannot connect each other.
Daw Aung San Suu Kyi is to speak to villagers and demonstrators this afternoon.
The riot police destroyed demonstration camps just before Daw Aung San Suu Kyi arrives.
About 500 villagers and monks had been demonstrating from November 17 to the Letpadan Tang copper mining project.
The project is run by Union of Myanmar Economic Holding Limited and China's Wanbou Copper Mining company.
The Environmental Impact Assessment and Social Impact Assessment of the project is to be done in March 2013. However, the mining activities has been started in 2012 without any EIA or SIA.
The demonstrators said that they are demanding to stop mining for three reasons: damage of religious buildings, damage to farm land and damage to health of people around the mine.
There are 26 villages in the vicinity of the mine and 33 villages.
"Ivenhoe's copper mine has only two mountains and six villages around. The two mountain is also 200 feet above sea level. In Latpadaung Taung there are 26 villages and 33 mountains, some of which are over 1000 feet above sea level. Obviously, the impact will be much much bigger than Ivenhoe's project," U Tin Maung Oo,ademonstrator said.
JINGHPAW GINRU GINSA LABAU/ DU WA MANAM TAWNG
at 11/28/2012 11:18:00 AM
at 11/28/2012 10:26:00 AM
“We have heard the cry of
the Kachin people and we must be willing to help them,” saidaVOM worker, after he met and interviewed Kachin believers in Myanmar “I saw pain and despair in their eyes, but in their hearts was the eternal flame of hope in Christ!”
By: Duwa Kachin
ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် မျှင့်တင်ဘို့ နေပြည်တော် အနီးမှာ ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ် ပြ(video)
at 11/28/2012 08:55:00 AM
အစိုးရက ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် မျှင့်တင်ဘို့ နေပြည်တော် အနီးမှာ ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ် ပြသ ရောင်းချမယ့် အဆောက်အဦတွေ ဆောက် လုပ်နေပါတယ်။ ဦးမောင်တူး တင်ဆက်။
Shim Lam N Mu
at 11/28/2012 08:43:00 AM
Myitrum manang ni, “Shim Lam N Mu” ngu ai Ga shagawp re yaw. Daini tsadan wa gaw, hpyen shalun sumpum jahkrit shama masu da nna, kahtet majan shazim, mare kaba de katsi majan she bai htim nga masai oi. Numsha ni pyi, baw machyi yang shakap ai baw plaster hpe tinang hkum shan kaw set di kadoi la nna shakap da nhtawm, madang tsaw dik ai hku she nanghpam tsi mawan hpe lang nga masai da e…… Plaster shakap chye ai shara ni gaw, baw na shagalawp hte numhkrang kaw re nga ma ai. Manu grai hkyam sa ai hte mari la mai ai da. Mogaung, MKA shinggan tsi seng hkan nanghpam tsi mawan hpe kadai n rim ai; wanglu wanglang mari la mai ai lam chye lu ai. Kahtet majanamatu akyu hpyi ai zawn, Katsi majanamatu mung akyu hpyi dum ga lu oi. Daini tsadan gaw amyu shamyit masing jahkrat tawn da ai hte maren, den nga sai ga re.
Myushayi myuaningli,
Shim lam n mu gin n di;
Moi na nat jaw prat hta grau,
Tsaban 21 nau nan hpyau.
Mare kaba nanghpam lusha,
Hkawn ram ni hta grau chyam bra;
Manu hkyamsa ladat shaw,
Lau bri lau hpam “ Sai” lam baw.
Lau lu lau sha lau si mat,
Myuaningli yawng hkra tat;
Katsi majan kaba rai,
Lau she hkan je la ra sai.
Hpyen-yen shayi ni hpan mi,
Jamjau jam hkau gin n di;
Miwa la ni sa hpyi la,
Hkungran poi mung galaw da.
Kau mi gunjang jang sha hkawm,
Miwaga de hkrai hkyawm hkyawm;
Hkalem hkalau dut sha kau,
Miwa la ni grai n rau.
Hpaji lam hta mung dumhprut,
Kyang lailen mung hten za shut;
Matsat shabat ana kap,
Makam masham mung ninghkap.
Daini Wunpawng Myu Shayi,
Shim lam n mu aten ni;
Myusha lam-yan grai nan hkra,
Myusha hku nan makawp da; ahkyak la ra sai lu e……..
at 11/28/2012 03:47:00 AM
ပန်ဝါ ဆိုတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဖက် တရုတ်ပြည်နယ်စပ် နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ မြို့ဟာ ကချင် အထူးဒေသ (၁) ဌာနချုပ်ပါ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ကျရှုံးချိန် ဇခုန်တိန်ယိန်း ဦးဆောင်သော မြောက်ပိုင်း ဗကပ အဖွဲ့ဟာ အစိုးရ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူပြီး New Democratic Army Kachin (NDAK) ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
ဇခုန်တိန်ယိန်းဟာ ကိုယ်ကျိုးမက်သူပီပီ အရင်တုန်းက ကေအိုင်အေ မှာ တပ်မှူးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ တရုတ်အစိုးရမှ ကေအိုင်အေကို ကွန်မြူနစ် လုပ်ရင် အစစ အရာရာ ထောက်ပံ့မယ် လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ အချိန်၊ ကေအိုင်အေက လက်မခံ ခဲ့သော်လည်း၊ သူ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တချို့ဟာ ကွန်မြူနစ်ဖက် ပြောင်းသွားပါတယ်။ ကေအိုင်အေဟာ အစကတည်းက ဒီမိုကရေစီ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ။ ဇခုန်တိန်ယိန်း အဖွဲ့ကတော့ နောက်ပိုင်း ကွန်မြူနစ် ကျခါနီးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူတော့ ကွန်မြူနစ်ကနေ နေ့ချင်းညချင်း ဒီမိုကရက် နာမည်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ လုပ်လိုက်ပြီး ပန်ဝါ နဲ့ ကန်ပိုင်တီ တောင်ကြောတလျှောက် ထူထပ်လှသော ထင်းရူးပင်များကို တရုတ်ပြည်သို့ ခုတ်ရောင်းနေခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု တောင် လုပ်စားလိုက်ရပါတယ်။
ထင်းရူးပင်များမက ပါဘူး။ အထူးဒေသ (၁) ငြိမ်းအဖွဲ့နာမည် နဲ့ ကုမ္မဏီ များထူထောင်ပြီး သတ္ထုတူးဖေါ်ရေး နှင့် ကျောက်စိမ်း၊ ရွှေ တူးဖေါ်ရေးများ မှလဲ တရုတ် လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ပူးပေါင်းပြီး အနစ်တွေ အများကြီး ထုတ်ယူလိုက်ရပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံထောင်ခြင်း နှင့် တရုတ် ကာစီနီု (လောင်းကစားရုံ) အကြီးစားတွေလဲ ပန်ဝါ အထက် ချမ်းယိန်းခူးနယ်မှာ အကျယ်တ၀န့် ဆောက်ထားပါသေးတယ်။ ဒါတွေမကပါဘူး၊ လက္ဖက်ခြံတမျော်တခေါ်လဲ လုပ်ထားပါသေးတယ်။
NDAK တပ်ဖွဲ့ထဲမှာ သူ့ခေတ်ပြိုင် အကြီးအကဲများကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး၊ သူတို့မိသားစု တခုထဲနှင့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို လည်ပတ်စေပါတယ်။ NDAK စစ်တပ်ကို ဘယ်လို ဖယ်ထုတ်လိုက်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ အချိန် မြန်မာ အစိုးရ ရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် အစီအစဉ်ဟာ သူတို့ မိသားစု အတွက် အခွင့်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ NDAK ထဲမှ ရာထူးကြီးပြီး ၀ါရင့်များကို လက်မခံပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး နောက်ပိုင်းမှ ၀င်လာသော အသက်အငယ်ပိုင်းများနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်ရင်း သုံးခု ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး၊ NDAK ခေတ် အဖွဲ့ပိုင် ဓနအားလုံးကို သူတို့မိသားစု ပိုင် အလိုအလျှောက် ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။နယ်ခြားစောင့်တပ်ကတော့ သူတို့ ကျွေးစရာမလို၊ အစိုးရက လစာပေးထားနေပြီ။
တနည်းပြောရမယ် ဆိုရင် မြန်မာ အစိုးရ ကို သူ့တပ်ဖွဲ့အားလုံး ရောင်းလိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကချင်အမျိုးသားရေး အမြင်ရှိတဲ့ သူ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့က မကျေနပ်ပါဘူး။ သူတို့ကို ရောင်းစားတယ် ဆိုပြီး ကွယ်ရာမှာ ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ပန်ဝါမှာ ပြိုင်ဖက်မရှိ အရှိန်အ၀ါ ကြီးမားလှတဲ့ သူတို့မိသားစု ကို ဘယ်သူမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဝေဖန်ရဲပါ။
သို့သော်... ကေအိုင်အေ နှင့် အစိုးရကြား တကျော့ပြန် စစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ.. အရင်က သူ့ တပ်မှူးတချို့ဟာ ကေအိုင်အေကို ကမ်းလမ်းလာပါတော့တယ်။တကယ်တော့ ပန်ဝါကို စတိုက်တုန်းက အားလုံး ကေအိုင်အေ မဟုတ်။ NDAK တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများ ဖြစ်သည်။ အခုလည်းပဲ သူတို့ နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း တခု အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပြီး နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) ၀န်းကျင်မှာ တပ်စွဲထားသည်။
ကချင် စစ်စစ်များကတော့ သူတို့မိသားစု နောက်ကို မလိုက်ပါ။ တချို့ ကိုယ်ကျိုးစီပွါးရေးသမား အနည်းငယ်လောက်သာ ကျန်နေတာပါ။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များဟာ ပန်ဝါ ဖက်ကို မပြေးပဲ နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) ဖက်မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့သစ်ထဲကို ပြေးဝင်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို ပြည်သူတွေ အယုံအကြည့် မရှိမှန်း သိသာသည်။နယ်ခြားစောင့်တပ် ဆိုသည်မှာလဲ ဗမာစစ်တပ် နှင့် ရောနှောထားသော NDAK လက်ကျန် တချို့သာ ဖြစ်သည်။
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း နှင့် တဆက်တစပ်ထဲ အင်မိုင်ခ မြစ်ရိုးတလျှောက် တရုတ် CPI ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ အတွက် ပန်ဝါမှ ချီဖွေကို တိုက်ရိုက် ကားလမ်းမကြီး ဖေါက်စေခဲ့ပါတယ်။ ကားလမ်းမဟာ ဒေသခံအိမ်ယာများကို ဖျက်စီးသော်လည်း တစုံတရာ လျှော်ကြေးမရတဲ့အပြင် လမ်းလုပ် တရုတ်များရဲ့ အဆဲအဆိုပါ ခံခဲ့ရပါတယ်။
အေးရှဝေါနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်သော အင်မိုင်ခ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဟာ အားလုံးပေါင်း (၅) ခုရှိတာပါ။ အမှန်ဆိုရင် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းတာ တွေ အထက်ပိုင်းမှာ ရှိသေးတာပါ။
နယ်ခံများ အပြောအရ... ချီဖွေမြစ်ကို ပိတ်တုန်းက နေ့စား လုပ်အားအတွက် ဒေသခံများကို တနေ့ ငါးထောင်ပေးမည်၊ ဆိုပြီး နေ့စားခေါ်တယ်။ တကယ်တော့ ငွေက တ၀က်ပေးပြီး ကျန်တ၀က်ကို ဘိန်းပေးလိုက်ပါသတဲ့။
နယ်ခြားစောင့်တပ်များကို အခွန်ဆောင်ပြီး တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ ဘိန်းစိုက်ခင်း အများအပြားလုပ်ထားရာ ဒေသ ကန်ပိုင်တီ တ၀ိုက်သို့ ၂၀၁၀ ဆောင်းတွင်းမှာ ကေအိုင်အေ ရဲ့ ဘိန်းခင်းဖြတ် စစ်ကြောင်းနဲ့ ဇခုန်တိန်ယိန်း ရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖွဲ့နဲ့ ထိပ်တိုက် တိုးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါတွေကြောင့်လဲ ကေအိုင်အေကို အခုထိသူတို့ မိသားစု မကြည်ပါ။
နောက်နောင်လဲ ကြည်မည်မဟုတ်ပါ။ ကချင်လူမျိုးကြားမှာ ဘုတိုက်နေတဲ့ မိသားစုကို ဗမာ စစ်တပ်ကတော့ မြောက်စားမြဲ မြောက်စားနေအုံးမှာပါ။
at 11/27/2012 12:25:00 PM
ကချင်အစိုးရကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံမူတွေကို မနှစ်မြို့ကြဘူး။
ဗမာအစိုးရကတော့ ပင်လုံစာချုပ်မူတွေကို ဖင်မွေးကျွတ်လောက်အောင် ကြောက်ကြတယ်။ Why?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဆောင်ပုဒ် (Motto) လေးက In God We Trust. တဲ့။
ဗမာပြည်ထောင်စုရဲ့ ဆောင်ပုဒ် (Motto) လေးက F.ederal, U.nion, C ocaine, K
at 11/27/2012 12:23:00 PM
တပ်မှူးဝါးဝူး။ ။ ဘာကြောင့် ဗမာ့တပ်မတော်သည် "အမျိုးသားရေးကို
ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်" ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကို ကိုင်စွဲကြတာလဲ..သိလား။
တပ်သားဝူးဝါး။ ။ ဒါက... အဲ.... အမျိုးသမီးအရေးတွေကိုဘဲ
သစ္စာဖောက်နေကြလို့ပါ။ ဥပမာ.... ကရင်၊ ကချင်စစ်ပွဲတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေကို
မုဒိန်းကျင့်တာ.... ပြီးရင်... ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက အစ တခြား
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက အမျိုးသမီး ငယ်ငယ်လေးတွေ...ရှင်းရှင်းပြော
ဖောက်လဲဖောက်ပြန်လုပ်နေကြလို့ပါ... ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးအရေးကိုဘဲ
သစ္စာဖောက်ပြီး အမျိုးသားရေးကိုတော့ သစ္စာ မဖောက်ရဲကြဘူးလေ။ ဗိုလ်မှူး...
တပ်မှူးဝါးဝူး။ ။ ဒါပေမယ့် ပြင်ဦးလွင်က DSA ဗိုလ်လောင်းလေးတွေ
အမျိုးသားကိစ္စကတော့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ နားလည်ထားရမယ်။ ဟုတ်ပြီလား....
တပ်မှူးဝါးဝူး။ ။ ဟေ့ကောင်....တပ်သားဝူးဝါး...မင်း ဗမာ့တပ်မတော်တွေ
ဦးထိပ်ထားတဲ့ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ပြောပြစမ်း....
တပ်သားဝူးဝါး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ...ဗိုလ်မှူး.. ဗမာတပ်မတော်သားတွေရဲ့
၁.. ငါကိုယ်တိုင် ကောင်းစားရေး..
၂.. ငါ့မိသားစု ကောင်းစားရေး..
၃.. ငါ့မယားပုန်း အသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်းစားရေး... တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူး...
တပ်မှူးဝါးဝူး။ ။ တော်တယ် မင်းတော်တယ်။ ရော့ မင်းအတွက်အရက်ဖိုး....
at 11/27/2012 12:18:00 PM
By Francis Wade Nov 26, 2012 1:09PM UTC
0 Comments and 20 Reactions
High up in the mountainous border region where Burma meets China, more than 70,000 displaced Kachin are bracing themselves for cold season. The plywood shelters in refugee camps, likely still recovering from the monsoon season, are no match for the end-of-year weather when temperatures dip to single figures.
It’s all depressingly familiar – the same warnings were issuedayear ago, and today refugee numbers have not diminished, nor has the government’s reluctance to allow international aid groups unfettered access to victims of the conflict. They, and millions of others in the country, know little of the heady developments of the past 12 months in Burma.
An issue often overlooked in coverage of Burma’s various conflicts is the psychological toll that those forced to flee their homes carry, but IRIN last week spoke with local aid worker May Li Awng who spelled out the situation.
A child holdsabowl of rice atarefugee camps in Laiza, northern Burma. Pic: AP.
“Some students have no interest in schooling and are refusing to go to school. They are listless – gazing somewhere. At night, they cry and sleep-walk.” May Li Awng directs the WPN umbrella group of Kachin NGOs who, given the woeful lack of outside assistance getting to the refugees, have essentially spearheaded the aid effort. They deserve great respect for their work.
Some estimate that around 50 percent of displaced Kachin are suffering from trauma. “We don’t have the human resources to heal such traumatized cases,” May Li Awng told IRIN. “All of the groups [donors] are just interested in giving material assistance. Few are interested in such issues.”
Other aid workers told me of similar concerns when I was there in June this year. La Rip, coordinator of the Relief Action Network for Internally Displaced Persons and Refugees (RANIR), based in Laiza, said that reductions in outside funding had forced them to concentrate on the primary concerns of physical health and food supplies. This means that for many, young children especially, their trauma is left to fester.
He said that local aid workers were either too overrun or unequipped to tackle the psychological problems emerging among the displaced. A year ago he warned: “We are at our wit’s end. If we don’t get support within the next couple of weeks, there could be serious problems with food and shelter shortages and worsening weather.” Now, with no UN convoy having reached eastern Kachin state since July, the same situation presents itself.
Aside from the fighting itself, the treatment of civilians by Burmese troops will have left deep scars. When the conflict first erupted in June 2011, various reports told of gang rapes and mutilation of Kachin women by soldiers, torture of males considered collaborators with the Kachin Independence Army, and so on. This has not stopped -amother of four was reportedly gang raped near the town of Mogaung in Kachin state on 1 November by Burmese soldiers. (See here forapast blog post on the Burma army’s use of rape asaweapon of war).
Moreover, children were often forced to flee their homes amid gunfire and walk days to reach safer ground, many getting ill along the way. They remain confined to refugee camps inatormenting state of limbo.
Funding clearly needs to be ramped up. President Obama touched on the conflict during his speech at Rangoon University last week, but one hopes he pressed for greater international access and an end to attacks by the Burmese army when he met privately with President Thein Sein. The ethno-religious violence in Arakan state will have distracted from Kachin state, but both situations require urgent attention.
at 11/27/2012 11:17:00 AM
Credit to Thiha Thwe
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ပန်တောင်းတောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သပ်ပြီးမီဒီယာတွေရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးစဉ်မှာသူတခုပြောခဲ့တာတော့ရှိတယ် အဲ့ဒါက " ကိစ္စတိုင်းမှာ Demonstration နဲ့ချည်းသွားလို့မရဖူး၊ Negotiation နဲ့သွားနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်" လို့ဆိုတာပါပဲ။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် Media ကန်တင်း၊ ၂၃၊၁၁၊၁၂)"
ကျနော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတိုင်းမှာ အစမကောင်းခဲ့လို့ အနှောင်းမသေခြာတာ တွေချည်းပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ တခုထဲကိုပဲ ကြည့်ပြီး Demonstration (လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်ရေးသမားကအစ) လုပ်နေသူတွေကိုပဲ အပြစ်တင်လို့မရပါ။ အစကတည်းကကို Negotiation အလုပ်မခံခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဝှေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေခဲ့လို့ မပြီးနိုင်၊ မပြတ်နိုင် ဖြစ်နေတာပါပဲ။
လက်ပံတောင်းတောင် လူထုရဲ့ တိုက်လှန်မှုဟာ တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားများ နဲ့ ပုံစံခြင်းမတူပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်ခြင်း တူပါတယ်။ နောက်ပြီး တိုက်ခိုက်နေတဲ့ မျက်နှာစာလဲ အတူတူပါပဲ။ အားလုံးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဌာနေမှာ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေလို့ ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေပါ။
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းဟာ ဦးပိုင် ကုမ္မဏီ မဟုတ်လဲ တချိန်ချိန်မှာ နယ်ခံကုမ္မဏီ များအနေဖြင့်ဖြင့် နယ်ခံပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒသဘောရယူခြင်းအား ဖြင့်ဖြင့် လုပ်ကို လုပ်လာမှာပါ။ သို့သော် လုပ်ပုံလုပ်နည်း နဲ့ အကျိုးစီးပွါးခွဲဝယ်မှုမှာတော့ တူတော့မှာ မဟုတ်။
ဦးပိုင်ကုမ္မဏီနဲ့ စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လင့်ဟင်းမှုကတော့ နယ်ခံ ပြည်သူများကို အသိပေးကောင်းရမှန်းတောင် မသိခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် သူတို့ သဘော၊ သူတို့ ရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်။ နယ်ခံများမှာတော့ ပြောချင်သော်ငြားလဲ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
အမှန်ဆိုရင်... ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်မှာတော့ ဒီလို မဟုတ်တော့ပါ။
နယ်မြေခံ အစိုးရ အာဏာပိုင်များ နဲ့ နယ်ခံ ပြည်သူများကြား နားလည်မှုကို အရင်တည်ဆောက်မယ်... အကျိုးစီးပွါးရယူသုံးစွဲမှုကို ထင်သာ မြင်သာ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်... နိုင်ငံတော်အတွက် ဆိုတဲ့ နာမ အစား နယ်ခံပြည်သူများအတွက် ဆိုတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဦးစားပေးလာမယ်... ဆိုရင်... တောင်ပြုန်းသွားရင်တောင် ပြည်သူတွေ ဘာမှ အတွန့်တက်တော့မှာ မဟုတ်။...
နယ်ခံပြည်သူများရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေပိုမို ဆိုးဝါးလာတာ မဟုတ်ပဲ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ အာမခံချက်ရရှိမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ နယ်ခံပြည်သူများကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပေးဖို့ပါ။ သူတို့မှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲ ဒီလို စီမံကိန်းများ မလုပ်ရမှာတော့ ပိုစရာမလို... သူတို့မှာ အကျိုးအမြတ်ရှိမှန်း သိလာရင် သူတို့ ရဲရဲ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့... သူတို့ကို အပြစ်ပြောနေလို့ ဘာမှ မထူးပါ။ သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက် မှန် တယ်၊ လို့ ယူဆပါတယ်။
chye ju dum shata
at 11/27/2012 11:04:00 AM
Myitrum manang ni, Shawng lam de myit dum let, “Chyeju Dum Shata” Ga shagawp gawp dat ai. Lai wa sai bat lani mi hta, Hpakant M post kaw na Mawmau KIA post de gap dat ai M myawk si langai, Shanhteamasha ni hpe sha bai hkra nna, marai7si mat ai lam na lu ai. M ni gaw Mawmau bum hpe ra nna, shanhte kam ai aten shagu myawk gap bun bun rai ma ai da. KK Mawmau bum hpe bau sin nga u ga i……kyu hpyi n malap ga lu oi.
Chyeju Dum Shata
Goi! Shawnglam de grai myit dum,
Share Ninghkring myit n htum;
Ginhtawng ta yinam lai,
Mungmasha hpe makawp ai.
Nsin nhtoi n lata,
Katsi kahtet n ginhka;
Machyi makaw hkam sharang,
Myu tsaw myit wa tsun n dang.
Majan pa grup grup gra gra,
Ten hpring sin di makawp ya;
Ginjaw Ginra shim lam lu,
Hpyen-yen masha amyit mu.
Myit ngwi sim let poi galaw,
Shim lam chyeju dum ai yaw;
Laban ni mung n ban lu,
Chyeju dum shata n mu.
Tim Myutsaw Brang myit dik ai,
Mungtsaw myit wa sakse tai;
Buga dum let akyu hpyi,
Kaduk nhkuneshingbyi.
Du na ra ai ten ni hta,
Awmdawm chyeju lu u ga;
Myutsaw Brang ni marit ai,
Chyeju Dum Ai Shata rai.
မနေ့ တစ်နေ့ ကအထိ တိုင်းပြည်အာဏာစိုးပြီး တိုင်းပြည်အသပြာ ခိုးခဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်များခဲ့သလဲ
at 11/27/2012 11:02:00 AM
shared Aye Chan Mon's photo.
မနေ့ တစ်နေ့ ကအထိ တိုင်းပြည်အာဏာစိုးပြီး တိုင်းပြည်အသပြာ ခိုးခဲ့သူတွေ
ဘယ်လောက်များခဲ့သလဲ။ ကျုပ် နာမနဲ့ တကွ စာရင်းချမပြချင်ပါဘူး။
။ ဟိုချုပ်မှူးကြီးဗျာ။ ဟိုဝန်ကြီး၊ ဟိုအရာရှိကြီး၊
ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၊ ဟိူသူဌေးကြီးဗျာ။ ဒီနေ့ သူတို့ ဘာဖြစ်နေသလဲ။ အဲသလို
...နိုင်ငံတော်သူခိုး- ဓားပြကြီးတွေဆိုတာ နည်းမှ
တ်လို့ ။ သူတို့ ရဲ့ စိန်စီသောနေ့ ၊
စိန်စီသောည၊ စိန်စီသောဘ၀တွေဆိုတာကလည်း ဟော်လေတကျိုး
ဟိုးလေးတကျော် မဟုတ်လား။ သူတို့ ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေသဗျာ။
သူတို့ ဟာ တိုင်းပြည်ကို ဓားပြတိုက်သလိုလုပ်တယ်။ အနုကြမ်းစီးသလို
လုပ်တယ်။ သူခိုးသူဝှက်လိုလုပ်တယ်၊ အချောင်နှိုက်သလိုလုပ်တယ်။
အလစ်သုတ်သလိုလုပ်တယ်။ ခါးပိုက်နှိုက်သလိုလုပ်တယ်။ အလွဲသုံးလိုလုပ်တယ်။
အဆိုးဆုံးက ရွာကိုဓားပြတိုက်ပြီး ရတဲ့ငွေနဲ့ ရွာကိုငွေတိုးချစားသလိုလုပ်တာပါဘဲ။
ကျုပ်တို့ ကြားချင်သိချင်တာက ခိုးကြောင်း ၀ှက်ကြောင်းတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။
သူခိုးသူဝှက်တွေကို ကြွေးပြန်ဆပ်ခိုင်းကြောင်းတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။
သမီးလေး အဓမ္မအားတင်ခံရတာကို အိမ်ပြန်အပ်ရင် ကျေနပ်ပြီဆိုသလို
လုပ်လို့ ပြီးတမ်းလား။ ဒီလို ခိုးတာ၊ ၀ှက်တာ၊ အလွဲသုံးတာတွေကို ပြန်လျော်ကွ
ဆိုရုံနဲ့ပြီးတမ်းလား။ ဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်ထားခဲ့သလဲ။
အရေးမယူဘူးလား။ ခိုးကြ ၀ှက်ကြ အလွဲသုံးကြဆိုတာတွေက ရသုံးစာရင်းတွေ
စစ်လောက်ရုံနဲ့ မပြီးသင့်ဘူး။ လုပ်ငန်းစာရင်းတွေရော မလှန်လှောတော့ဘူးလား။
လွန်လေပြီးသော လက်ထက်တော်ကြီးတွေတုန်းက နိုင်ငံအဆင့်စီမံကိန်းကြီး
တွေတုန်းကရော ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်တွေလား။ ဟိုမှူးကြီး၊ ချုပ်ကြီး၊
ချုပ်မှူးကြီးတွေအလိုတော်ကျ စီမံကိန်းဖော်ခဲ့တာဆိုတဲ့ ခရိုနီအာဏာကပ်ပါး
တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကော မလှန်လှောတော့ဘူးလား။
ကျုပ်ပြောနေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ငွေကြေးဥစ္စာတွေ ခိုးတာ ၀ှက်တာ အလွဲသုံးတာက
လာဘ်ပေး လာဘ်ယူလို နှစ်ဖက်နှစ်လမ်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ တစ်ဖက်တည်းကြမ်းတဲ့
တစ်လမ်းသွားဗျ။ အဲဒါက တိုင်းပြည်ကို ဓားပြတိုက်တာဗျ။ အဲဒီ တိုင်းပြည်
ဓားပြတိုက်၊ တိုင်းပြည်ဝမ်းဗိုက်ဖောက်တဲ့အမှုကြီးကို အလျော်ပေးရုံနဲ့ 
ပြီးတမ်းလား။ တာဝန်ရှိသူတွေ တာဝန်ခံကြရမယ်ဗျ။ တာဝန်ယူကြရမယ်ဗျ။
ပုဒ်မခွဲ တပ်ရမှာဗျ။ အမှုခွဲ စီရင်ရမှာဗျ။ အပြစ်ခွဲ ချမှတ်ရမှာဗျ။ အာဏာရှင်တွေ
အချင်းချင်း ကွဲကြ ပြဲကြမှဘဲ သူတို့ ချင်း ဓားပြမှုပုဒ်မတွေကပ်၊ အပုပ်တွေချ၊
အပြစ်တွေပေး ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ကြတာဗျ။ တိုင်းပြည်ကိုဓားပြတိုက်ခဲ့တဲ့
ပြစ်မှုကြီးတွေ တရားခွင်ရောက်ကြရလိမ့်မယ်ဗျ။ ပြီးတာတွေ ပြီးပါစေလုပ်လို့ 
မရဘူးဗျ။ ပွင့်လင်းမြင်သာခေတ် ရောက်ပြီပြောကြမလား။ ပွင်းလင်းရင် မြင်သာ
တယ်။ မြင်သာရင် မြင်တာကိုပြောရမယ်။ မြင်တာတွေက ခေတ်အမှားတွေ။
အဲဒိခေတ်အမှားတွေကို လူထုတရားခွင်၊ မီဒီယာတရားခွင်၊ ကမ္ဘာ့ တရားခွင်
အရောက်ကို ပို့ ကြရမှာဗျ။
(ကိုအောင်မျိုးထွန်း ထံမှ တဆင့် ....)
အေးချမ်းမွန်မှ ခေတ်သတင်း တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Photo From :ခေတ်သတင်း
Peace Exchanges/Bullet Exchanges"မတူတာလေးတွေ(14)
at 11/26/2012 12:25:00 PM
နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာ မူဆလင်တွေက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကို ဗုံးခွဲပြီး ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်။
ကချင်ပြည်မှာတော့ ဗမာစစ်တပ်တွေက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကို အမြောက်တွေနဲ့ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်။ Why?
လွတ်တော်မှာ ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနေရပြီ။
ကချင်စစ်ရေးအတွက်တော့ အခုထိ လွတ်တော်မှာ ဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောဆိုဆောင်
ရွက်နေတာ မရှိသေးဘူး။ Why?
ဂါဇာနဲ့ အစ္စရေးကြားမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်းဘဲ "Peace Exchanges" တွေ ရသွားခဲ့ပြီ။
လိုင်ဇာနဲ့ နေပြည်တော်ကြားမှာတော့ တစ်နှစ်ကြော်ကြာလာသည့်တိုင်အောင် အခုထိ "Bullet Exchanges" ဘဲလုပ်နေကြတယ်။ ပစ်တာ ခတ်တာဘဲ အကျင့်ပါသွားကြလို့လား။ ပင်လုံ အမှန်တရားကြီးကို ရင်မဆိုင်ရဲလို့လား။ Why?
at 11/26/2012 12:21:00 PM
တပ်သားဝူးဝါး။ ။ဗိုလ်မှူး ၀ါးဝူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တခါက တော်လှန်ရေးပန်ခြံမှာ ဟောပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းဟာ ဘာကြောင့် " ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်း " လို့ နာမည်ကြီးခဲ့ရတာလဲ။
တပ်မှူးဝါးဝူး။ ။ဒါက တော့ကွာ... အဲဒီအချိန်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သူ့မိန့်ခွန်းမှာ တရားမျှတရေး၊ တမ်းတူအရေးတွေ အလေးမပေးခဲ့ဘဲ စည်းကမ်းရှိဖို့၊ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ နေထိုင်ဖို့ဘဲ ဆရာကြီးလုပ်ပြီး ဟောသွားခဲ့တယ်လေ။ နောက်တော့
လာနားထောင်တဲ့ သူတွေက ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ဘဲ တောက် တခေါက်ခေါက်နဲ့ ပြန်သွားခဲ့ကြလို့ ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်းဆိုပြီး နာမည်ကြီးသွားခဲ့တာဘဲ။တပ်သားဝူး
တပ်သားဝူးဝါး။ ။ ပေါက်ပြီ....ပေါက်ပြီ... ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကား အလကား ဖွတ်ကျား ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။
တပ်သားဝူးဝါး။ ။ ဒါနဲ့ ငါတို့ရဲ့ ဗမာစစ်တပ်ကို တပ်မတော် လို့ ဘာကြောင့် ဗမာတွေက အငမ်းမရ ခေါ်ချင်ရတာလဲ။ ဗိုလ်မှူး......
တပ်မှူးဝါးဝူး။ ။ အဲဒါက ဒီလိုရှိတယ်။ ဦးနုလက်ထက်မှာ ဗမာတပ်တွေ မတော်လို့ စောက်သုံးမကျလို့ ရန်ကုန်မြို့ကို ကရင်တွေ သိမ်းပိုက်ခါနီးမှာ ကချင်တပ်တွေက လာပြီးကူတိုက်ပေးခဲ့ရတယ်လေ။ အဲဒီကစပြီး ဗမာတပ်မတော်ဆိုပြီး ဗမာတွေက ဘုမသိဘမသိနဲ့ ခေါ်လာခဲ့ကြတာပေါ့။ တပ်သားဝူးဝါးရေ....
China media tsun ai Kachinalam ni
at 11/26/2012 11:40:00 AM
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ် စခန်း သွားေ၇ာက်စဉ် တရုပ်အစိုး၇ အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတင်းပါ
at 11/26/2012 10:06:00 AM
Tu Lum Um
ဒီမနက် အိပ်ယာက ထထချင်း ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို တခုချင်း ကြည့်တယ်၊ Aye Chan Mon Media ကိုသဘောကျတယ်၊ Aye Chan Mon Media ထဲက သတင်းတခု ကြောင့် ဒီစာေ၇း ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်၇တယ်။ အဲဒီ .. ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ် စခန်း သွားေ၇ာက်စဉ် တရုပ်အစိုး၇ အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတင်းပါ။ အဲဒီ သတင်းကို
Aye Chan Mon က Tin Latt FB ပေါ်က ယူပြီးတင်လိုက်တာပါ၊ Tin Latt ၇ဲ့အမြင်က ဗကပကို တရုပ်က ကူခဲ့တယ် အခုလည်းတရုပ်က KIA ကိုကူညီနေတယ် လို့ ဆိုထားတယ်။
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၇ဲ့ပါးစပ်ကနေ “တရုပ်ကို လည်းတပည့်တော်တို့ကြောက်၇ပါတယ်” နောက် ပြီးတော့ “ တိန့် ရှောင်ဖိန်အစိုး၇တက်လာတဲ့ အခါမှာ ဒီထောက်ပံ့မှုတွေ အကုန်ဖြတ်လိုက်တဲ့ အခါကြတော့ ဗကပ ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ် .. ဒါကြောင့်တရုပ်နဲ့ လည်း ၇န်မဖြစ်၇ဲဘူး“ ဆိုပြီးတော့ မြန်မာ ပြည်သူတွေကို တရုပ်၇ဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ဆော်သြ လိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ဗမာ Media နဲ့Think Tank Group တွေအကြားမှာ အတွေးအခေါ် အယူအဆ အမျိုးမျိုး ပြောဆိုေ၇းသား လာကြတာကို တွေ့ ၇ ပါတယ်၊ အဲဒီထင်ကြေးအမျိုးမျိုးတွေထဲက တချို့ ကောင်းပါတယ် .. တချို့ ထင်ကြေးတွေကိုကြည့်၇င် MSL, SLORC ခေတ်တုန်းက brainwash ထိခံထား၇တဲ့လူတွေ၇ဲ့ အေ၇းအသားတွေကိုလည်း တွေ့၇ပါတယ်။
အဲဒီ တရုပ်ကြောက် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းရဲ့ဒေဿနာတော်ကြောင့် KIA နဲ့ကချင်တို့ ၇ဲ့တော်လှန်ေ၇းအပေါ် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်တာကိုလည်း စာေ၇းသူအနေနဲ့မြင်နေ၇ပါတယ်၊ စာေ၇းသူ နဲ့စာဖတ်သူ အားလုံး ဗမာပြည်၇ဲ့ပြဿနာ တွေ အမြန်ချုပ်ငြိမ်းေ၇းကို လိုချင်၇င် ကိုယ်တိုင် ဂဂနန ၁၀၀% မသိဘဲဖြီးဖြန်းေ၇းသားနေတာတွေကို ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ်၊ ဗမာပြည်မှာ လူမျိုးေ၇း မုန်းတီးမှု မီးစလောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာသာေ၇း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်၊ ပြည်တွင်းစစ်မီး မငြိမ်းသေးဖူး .. အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီး ပြည်သူလူထု ဒုက္ခေ၇ာက်စေမဲ့ အတွေးအခေါ်ေ၇းသားမှု တွေကို အထူးသတိထား၇ပါမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ် တည်ဆောက်လို၇င် ဆင်ခြင်တုံ တ၇ား မရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊
KIA ၊ ကချင်တို့ ၇ဲ့တော်လှန်ေ၇း နဲ့ ဆိုင်ပြီး ကျနော့ အမြင်တင်ပြပါ၇စေ။
ကေအိုင်အေ တောင်းဆိုနေတာက..တိုင်း၇င်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ေ၇း၊ တိုင်း၇င်းသား တန်းတူ အခွင့်အေ၇း ၇ရှိေ၇း၊ ဖယ်ဒ၇ယ်ပြည်ထောင်စု စနစ် ဖြစ်ပေါ်လာေ၇း တွေကိုတောက်ရှောက် တောင်းဆိုနေကြတာပါ၊ ဒီအတွက် မနဲ ခုခံစစ်ကို တိုက်ခိုက် နေကြ၇တာပါ။
ဗမာ - အမေ၇ိကန် ဆက်ဆံေ၇းတိုးတက်ဖို့တရုပ် အစိုး၇ အနေနဲ့ပီကင်းမှာ အိမ်ရှင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်.. UNSC အစည်းအဝေးတိုင်း ဗမာအစိုး၇ကို တရုပ် အကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ် ..အခု အမေ၇ိကန် - ဗမာ ဆက်ဆံေ၇း ဘယ်ကိုခြေလှမ်းနေသလဲ? တရုပ် အစိုး၇ မျက်စိဒေါက်ထောက်ပြီး ကြည့်နေမှာ သေချာ တယ်. ဗမာ စစ်အစိုး၇နဲ့တရုပ်အစိုး၇ ဗမာတပြည်လုံး ဇောက်ထိုးမိုးလှန် နေတုန်းက မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ၇ပ်ဆိုင်းဖို့၂၀၀၇ခုနှစ် KIA အဖွဲ့ တရုပ်သမ္မတ ဟူကျင်တောင်းဆီ ကန့်ကွက်စာပေးပို့ ခဲ့ပေမဲ့ အ၇ာမထင်ခဲ့ဘူး(ဗမာပြည်သူတွေ မပါဝင်ခဲ့ဘူး)၊ အခု ကချင်စစ်ပွဲကြီးလည်း တရုပ်စီးပွါးကာကွယ်လို တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကြောင့် ဆိုတာ မျှမျှတတ စဉ်းစားနိုင်သူတိုင်း မြင်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ၊ ကိုးကန့် အဖွဲ့ကိုနိုင်လိုက်တော့ေ၇နံပိုက်လိုင်းလုံခြုံေ၇း ခေါင်းခဲနေတဲ့အချိန် KIA ကို (၇) ၇က်တပတ်အတွင်း အပြီးတိုက် နိုင်တယ်ဆိုပြီး တရုပ်ကိုသွားညှိတယ်၊ တရုပ်က မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့ နောက် ဒီစစ်ပွဲကြီး စတင်လာတယ်ဆိုတာ ဗမာနိုင်ငံေ၇းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူ အများသိပြီးသားကိစ္စပါ။
ကေအိုင်အေကို ကူညီ၇အောင် ကေအိုင်အေ က UNFC မှာ ဥက္ကဌ နေ၇ာ ယူလို့ ၇နိုင်ပါ့ မလား? တရုပ်က UNFC ကိုအနောက်ယိန်းတယ်ဆိုပြီး အားပေးထောက်ခံမှု မရှိဘူး UWSA အဖွဲ့ အနေနဲ့UNFC ထဲဝင်ဖို့ အေ၇း တရုပ်၇ဲ့pressure ကြောင့် ဒီနေ့ ထိ မပါဝင်နိုင်ကြသေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၀လူမျိုး ဟာ မြန်မာတိုင်း၇င်းသားဖြစ်တဲ့အလျေက် ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် အစိုး၇ပြောနေတဲ့ BGF ကိုလက်ခံ မလား? တိုင်း၇င်းသားနိုင်ငံေ၇းမှာ ပါဝင်လာမလား ဆိုတာကတော့ UWSA ၇ဲ့ ဆုံးဖြတ်၇မဲ့အေ၇းကြီး အချက် တခုပါ၊ ဒီအတိုင်းဘဲသွားမယ်ဆိုတာ အခက်အခဲများမှန်း UWSA ခေါင်းဆောင်တွေလည်း သိကြမယ် လို့ ယူဆ၇ပါတယ်၊ အ၇င် ဗကပ ခေတ်အတွေ့ အကြုံကလည်းရှိပြီးသား။ (နောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ် ဆိုတာတော့ .. စောင့်ကြည့်ရုံပေါ့)
ဗမာ့တပ်မတော်ချည်းဘဲ တိုက်နေရုံနဲ့ဒီစစ်ပွဲ ဒီလောက်ကြာလာစ၇ာ အကြောင်း မရှိသလို နိုင်ငံတကာ ကလည်း ၇ပ်ကြည့်နေစ၇ာ အကြောင်း ရှိမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ် ..
ဒီစစ်ပြီးဆုံးဖို့ က လူလိမ်အစိုး၇၇ဲ့ထိုးစစ်၇ပ်ပြီး ကျွံနေတဲ့တပ်တွေ ဆုတ်သွား၇င် ကေအိုင်အေ အနေ နဲ့စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ ထိ လိုက်တိုက်ကြမယ်မထင်ဘူး ..
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းေ၇းအတွက် .. ကချင်အေ၇းကို ဘက်မလိုက် ဖဲ ကူညီကြမလား? ဘေးထိုင်ဘုပြော ကချင် စစ်ပွဲ ပိုကြီးအောင် လုံ့ ဆော်ကြမလား? ဗမာပြည်သူတွေ၇ဲ့နိုင်ငံေ၇း အသိ ပေါ်မှာဘဲ မူတည် မှာပါ။
ဗမာတောမှာတောင် မကျေနပ်ချက်တွေက တပုံတပင် .. ကချင်တွေအနေနဲ့နေ့ နေ့ညည သတ်ဖြတ်ငြင်းဆဲခံနေ ၇တာ အနှစ်(၅၀) ကျော်နေပြီ ဆက်ပြီးငြိမ်ခံကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
Milla Dawt Hniang ( Chin myushayi sha yu ngwi ning hkringashakut ai lam)
at 11/26/2012 09:53:00 AM
NATIONWIDE ALBUM RELEASE DATE: JANUARY 8TH 2013! COMING IN ITUNES, AMAZON, AND IN YOUR LOCAL RETAIL STORES (LISTING WILL BE AVAILABLE SOON) EARLY DOWNLOADS AVAILABLE AT TATE MUSIC STORE: http://www.tatepublishing.com/bookstore/book.php?w=847726006806
Hi, I am Milla :) I am 22. I am originally from Burma, Chin. I amasinger/song writer. I sing country music, I haveavery strong passion towards music (singing).
I got diagnosed with the Polio disease3days before i turned one year old. No one expected me to live-not even doctors, but i've been givenasecond chance to live my life to the fullest. I thank God everyday for my life. I started singing atavery young age. I basically grow up in hospitals, i was never allowed to attend school with other kids so i was home schooled. I hadalot of time in my hand while other kids were at school so my interest in Music/Singing started atavery young age. At age4i started singing in front of people and i enjoyed entertaining others around me. My family didn't owned any TV so i would sing for my neighbors in returned they would invite me to their home to watch TV. Thankfully, i've been blessed to be givenachance to come to America at age 8 and i've been given countless opportunities to follow my dream of becomingaprofessional musician one day.
Read more+++++click on link
Laiza chyeju dum poi
at 11/26/2012 09:36:00 AM
Myitrum manang ni, mani gaw Laiza Buga Hpungachyeju dum poi re. Daini, “ Laiza Chyeju Dum Poi” Ga shagawp shagun dat ai. Buga masha ni hte Hpyen-yen ni Unawng Uwa chyeju shakawn shata hpe hkrang shapraw ma ai. Shawa masha grai law ai majaw, n dang daw sha ga ai.Chyeju dum magun lit 151 rai nna, Sak jaw ai chyeju dum Alu hkungga ni yawng hpe, Shawnglam Share Ninghkring nialusha matu jaw bang ya na re lam shiga na lu ai. Alu kade re ai hpe bai shana wa na yaw. Chyeju shakawn ga i.
Goi law aw-! daini gaw,
Chyeju dum poi ninghtoi gu,
Htang myit yu yang grai kabu;
I majan kaba tsin-yam,
Ru yak kyin dut gaja nyam;
Lahkawng ning ngu na aten,
Chyeju dum poi mung dingren;
Nu Wa Hpung woi myit dating ,
Myit rawt jasu woi shading;
Chyeju n dum n nga lu,
Mara lu na zawn she ngu.
Maning yinam shang kaw na,
Tai hte majan hkat ai wa;
Yak hkak jam jau tsun n dang,
Lanam Zindam htu marang ;
Ya gaw lanam hkying ten lai,
Shimari marang teng sha wai;
Nshung sama pyi she mawng;
Karai chyeju grai gumhkawng;
N dang hti ai chyeju wa,
N shakawn yang n mai na.
Dai majaw le – e,
Daini Laiza Buga,
Chyeju dum poi kaba;
Hpung masha yawng hkra hkyawm,
Hpyen-yen ni mung lawm.
Majan nhpanamajaw,
Yi Sun hkauna n galaw;
Shu la nai mam n nga tim,
Chyeju dum ai myit n zim;
Lai sai shaning law law hta ,
Hkam la chyeju hti shaja ;
Ya mung Mana muk hte bau,
Karai chyeju grai she mau;
Wu wu di di chyeju dum,
Tsadan wa pyi myiman sum;she- rai mat wa sai le.
Oh! Tsawra hkawp hpunau ni,
Htet dat mayu ga hkaw mi;
Matsing sumhting da ga yaw,
Grau ahkyak ten du sai law;
Tsadan Wa hkalem hkalau,
Lapran sumprat hte chyinglau;
Hpa-awn ni myit n hten ga,
Mungmasha shadaw shaja;
Annau ni makyit langai,
Shabawn langai sha mi tai;
Amyit amang rau sha rum,
N-gup aga rau jahkrum;
Wari singgat rau sha lwi;
Shawanang hkachyi rau sha chywi;
Shada rau lata gindun,
Tsawra myit hkak hkak madun;
Tsadan wa n dang lu hkra,
Nbung katsi n shang u ga;
Padang Hkrun Lam Majan masing,
Awng Dang Ai Chyeju Shaning ;
Htaning na chyeju dum poi;
Majan hkoi mat nu ga oi……
¬ 26.11.2012 ya shani shapoi ai re.
စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းပျက်ပြားနေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေဟာ ရှေ့တန်းမှာ ဆက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင...်လိုတဲ့ဆန္ဒ ကုန်ဆုံးသွားပြီ
at 11/26/2012 09:14:00 AM
by MKA on November 25, 2012 (facebook)
စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းပျက်ပြားနေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေဟာ ရှေ့တန်းမှာ ဆက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင...
်လိုတဲ့ဆန္ဒ ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တပ်စခန်းကနေထွက်ပြေး လျက်ရှိနေကြတယ်။ ရှေ့တန်းထွက် တပ်မတော်သားတိုင်းဟာ နိုင်ငံအကျိုးရလဒ်မျှော်မှန်းစရာမရှိတဲ့ စစ်ပွဲကိုငြီးငွေ့လာနေကြပါပြီ။ အာဏာရှင်၊ အာဏာရူး လူတစ်စုရဲ့ တဖက်သတ်မှားယွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါးကိုအခြေခံတဲ့ စတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထွန်းရေးကို ရုပ်လုံးဖေါ် နေတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အမိန့်ပေးခိုင်းစေမှုတွေကြောင့် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်မှာ တပ်မတော်သား ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ဘ၀စတေးခံခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီတပ်မတော်သားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဆွေးမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေဟာ မိသားစု ပြိုကွဲခံရပြီး ဘ၀တွေပျက်စီးခံခဲ့ရတာဟာ သောင်း၊ သိန်း ချီနေပြီ။
ဒါတွေကို စဉ်းစားတွေးခေါ်သိတတ် နားလည်သတိထားမိတဲ့ တပ်မတော်သားတွေဟာ တပ်စခန်း ကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဘို့အတွက် အခွင့်အလမ်း၊ အခွင့်အရေးကို ရှာကြံလျက် ရှိနေကြတယ်။ “တပ်မတော်အင်အားရှိမှ၊ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်”ဆိုတဲ့ တပ်မတော်အစိုးရရဲ့ ဟစ်ကြွေးသံတွေဟာ၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာဘို့ ခက်ခဲပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ဟာ ခေတ်မီ ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ပေမဲ့၊ အခြေခံအင်အားစု ဖြစ်တဲ့ အောက်ဆင့်အရာရှိ ငယ်တွေ၊ အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေဟာ ကျေးကျွန်သဖွယ်ဘ၀နဲ့၊ လုံးပမ်းနေကြရပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အား လုံးဝကျဆင်းကာ နှလုံးရည်ပျောက်နေကြပါပြီ။
စစ်အစိုးရခေတ်မှာတော့ စစ်သားဆိုတဲ့ ဘီလူးခေါင်းစွပ်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ၊ ကိုယ်လိုရာကို အတင်းအဓ္ဓမ ပြုမူပြီး ငွေကြေးအချိုသပ်ဖားအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ခေါင်းလုပ်လို့ရခဲ့ပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ဟာ နေ၀င်ဆည်းဆာအချိန်ပါ။
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ထဲမှာ အခြားအဆင့် ရဲဘော်တွေရဲ့ဘ၀ဟာ အလွန်သနားစရာတွေပါ။ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုပ်ထားရသလိုပါ။ တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်း ရှေ့ကလာမဲ့ ကျည်ကို သတိထားနေရသလို နောက်ကျည် ကိုလည်း ကြောက်နေရတဲ့ဘ၀တွေပါ။ စားရေး သောက်ရေး ခက်ခဲတဲ့အထဲ အထက်အရာရှိ အဆင့်ဆင့်ရဲ့ တာဝန်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကမှာ ၀န်ဆောင်ပေးနေရမှု၊ ညှင်းဆဲခိုင်းစေမှု တွေဟာလည်း ရဲဘော်တွေကို စိတ်ဓါတ်ကျဆင်း၊ ပျက်ပြားစေရတဲ့ဘ၀ ရောက်စေခဲ့တယ်။
ရှေ့တန်းစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေဟာ စစ်ယူနီဖောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မ၀တ်ဆင် ဘဲ အရပ်ဝတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ ထွက်ပြေးရာမှာ အလွယ်တကူ အသွင်ပြောင်းနိုင်ဘို့ အတွက်ပါ။ အချို့ရဲဘော်တွေဟာ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ အားကစား ဘောင်းဘီ တွေကို ၀တ်ထားပြီး၊ ကြယ်သီးအဆင်သင့် ဖြုတ်ထားတဲ့ စစ်အင်္ကျီ အောက်မှာ အရပ်အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားကြတယ်။ စစ်ဦးထုပ် မဆောင်းဘဲ ခမောက် ဒါမှမဟုတ် Cap ဦးထုပ် ဆောင်းထားကြ တယ်။ အချို့ဆိုရင် ညှပ်ဖိနပ် စီးထားကြတယ်။
ဒါတွေဟာ KIA ဖက်က အထင်မှားအောင် အရပ်သားအသွင်သဏ္ဍာန် ယူတာဖြစ်သလို၊ တိုက်ပွဲဖြစ်တာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အခွင့်အရေးရတာနဲ့ အလွယ်တကူထွက်ပြေးပြီး အရပ်သားအသွင်ပြောင်းနိုင်ဘို့ အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဖားတစ်ပိုင်း၊ ငါးတစ်ပိုင်း စစ်သည်များကိုသာ ရှေ့တန်းနယ်မြေ တွေမှာ တွေ့နေကြရတယ်။ ဒါကြောင့် “မြန်မာအစိုးရစစ်သားတွေကို စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ ရှေ့တန်းမှာ တွေ့ချင်လှပါပြီ” ဆိုပြီး KIA စစ်သားတွေ ဟာသနှောပြီး ပြောဆိုနေကြတယ်။
ဒါတွေကြောင့်ဘဲ ရွှေလီမြို့မှာ KIO အဖွဲ့နဲ့ ဦးအောင်သောင်း အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံစဉ်တုန်းက KIO ဖက်က ပြောဆိုတဲ့စကားမှာ “မြန်မာအစိုးရစစ်သားတွေ ထဘီဝတ်ပြီးတက်လာတယ်”လို့ ထည့်ပြောရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ရွှေရောင်တပြောင်ပြောင်နဲ့ မီးပူခေါက်ချိုးအတိုင်း စစ်ဝတ်စုံအပြည် တပ်မတော်အရာရှိတွေက တပ်မတော်ကို သိက္ခာချတယ်ဆိုပြီး ဒေါပုန်ထခဲ့ကြတယ်။ ရှေ့တန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အဖြစ်မှန်ဘ၀ကို နေပြည်တော်မှာ အခန့်သားရှိတဲ့ သူတွေမသိလို့ ဒေါပုန်ထတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ထွက်ပြေးတဲ့တပ်မတော်သားတိုင်းဟာ စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးကို လွှင့်ပစ်ထားခဲ့ကြတယ်။ ခြေစီး စစ်ဖိနပ်၊ စစ်ရောင် ခြေအိတ်ကအစ အစိမ်းရောင်ပါတဲ့ အသုံးအဆောင်အားလုံးကို နာကျည်းစွာ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။ သေနတ်တွေကိုလည်း လွှင့်ပစ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ တပ်မတော် သားတွေဟာ မိမိထမ်းဆောင်နေရတဲ့ တာဝန်ဟာ အကျိုးမရှိလို့၊ ဘ၀စတေးခံနေရလည်း တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုးရလာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ လူ့ဘ၀၊ အသက်တစ်ချောင်း မပျက်စီးစေချင်လို့ အရဲစွန့်ထွက်ပြေးနေကြရတာ ဖြစ်တယ်။
အချို့တပ်ပြေးတွေဟာ ကံကုန်ကြလို့ မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်းက ပြန်ဖမ်းမိတဲ့အတွက် ကံဆိုးစွာ စံပြအနေနဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြတယ်။ နိုဝင်ဘာလ(၂၄)ရက်နေ့က နားဖေါ့စစ်စခန်းမှာ အခြေချ တပ်စွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ ဆားမှော်အခြေပြု ခလရ(၁၀၅)တပ်ဖွဲ့က တပ်မတော်သား(၃)ယောက်ဟာ ကိုယ်လွတ်ရုံန်း ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးကို တောထဲမှာ ဖျောက်ဖျက် လွှင့်ပစ်ထားခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့ တပ်ပြေး(၃)ယောက်ကို နားဖေါ့တပ်စခန်းကနေပြီး လက်နက်ငယ်၊ လက်နက်ကြီး တွေနဲ့ လိုက်လံပစ်ခတ်ကြပေမဲ့ ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူး။
ကံအကျိုးပေးတဲ့အတွက် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဖမ်းခံခဲ့လို့ လူ့အသက်(၃)ချောင်း ဆက်လက် ရှင်သန်ခွင့် ရခဲ့တယ်။ အဲဒီတပ်ပြေးတွေ ပြောဆိုချက်အရ နားဖေါ့တပ်စခန်းမှာ ရိက္ခာပြတ်နေလို့ ထမင်းနပ်မှန် မစားရကြောင်း၊ သောက်ရေကိုလည်း ချွေသာသောက်သုံးနေရကြောင်း၊ နေပွင့်ချိန် နာရီပိုင်းမျှသာ နေပူဆာလှုံခွင့်ရကြောင်း၊ ရေမချိုးဖြစ်သည်မှာ နှစ်လခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း မျက်ရည် တဖြိုင်ဖြိုင်ဖြင့် ရင်ဖွင့်ပြောဆိုကြတယ်။
ဆောင်းတွင်းဝင်လာပြီဖြစ်သော်လည်း အပေါ်ဝတ်အနွေးအထည်မရှိ၊ စောင်တစ်ထည်ကို ရဲဘော် (၂)ယောက် ပေါင်းအိပ်နေကြောင်း သိရတယ်။ အအေးဒါဏ်နဲ့ အာဟာရပြတ်လတ်တဲ့အတွက် ဒီအတောအတွင်း ရဲဘော်(၆)ယောက် ထက်မနည်း သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရတယ်။ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းစရာကတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ နာရေးသတင်းကို မသိရှိတာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြတယ်။ နားဖေါ့တပ်စခန်းဟာ အမြင့်ပေ(၆၀၀၀)ခန့် ရှိတဲ့အတွက် ဆောင်းတွင်းမှာ အပူချိန်ဟာ ရေခဲအမှတ်အောက်ရှိတဲ့ တောင်ထိပ်ပါ။
အဲဒီတပ်ပြေး(၃)ယောက်ဟာ စုတ်ပြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အ၀တ်အစားကို ၀တ်ဆင်ထားကြပြီး သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တရုတ်ပြည်ဘက်ကို ပြေးဝင်၊ အဲဒီကနေတဆင့် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဇာတိကို ပြန်နိုင်ဘို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုကြတယ်။
ဒါတွေဟာ ကချင်ဒေသတွေမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ဘ၀ပါ။ အချို့ဟာ လူမသိ သူမသိနဲ့ဘဲ တောတောင်ထဲလမ်းပျောက် အစာရေစာ ငတ်ပြတ်သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။ ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်ရောက် တပ်သားအချို့ဟာ နောက်တန်းပြန်နိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး အသုံးပြုကြ ကြောင်း သိရတယ်။ တိုက်ပွဲအနည်းငယ်ဖြစ်တာနဲ့ ဒဏ်ရာဖြစ်စေဘို့တွက် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ အသက် အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ပစ်ခတ်ယူကြတယ်။ တိုက်ပွဲဒဏ်ရာရ ရဲဘော် အဖြစ် နောက်တန်းပြန်ကြတယ်။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော်သားတွေဟာ ရှေ့တန်းမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့တိုက်ပွဲကို ငြီးငွေ့လာကြပြီ ဖြစ်လို့ အဲဒီဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုနေကြပါပြီ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအထွေထွေသပိတ်တစ်ခု ဆင်နွှဲသင့်တယ်။
at 11/25/2012 11:55:00 AM
by face book Ven Ravika
ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အာဏာရပါတီ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရက စိတ်မဝင်စားခဲ့ရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေ
း အထွေထွေသပိတ်တစ်ခု ဆင်နွှဲသင့်တယ်။
၁။ ဒီသပိတ်ကို ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သင့်တယ်။
၂။ အထွေထွေသပိတ်၊ ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်ဖြစ်လို့ ဘာခွင့်ပြုချက်မှ တောင်းစရာမလိုပါ။
ာ မကျေနပ်ချက်ရှိသူတိုင်း ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်။
၄။ ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ကိုယ်စားပြုတဲ့သပိတ်မဟုတ်။ နိုင်ငံတော်ကိုသာ ကိုယ်စားပြုတယ်။
ဒီလိုသပိတ်မျိုးသာ အပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ရှေ့ချီသပိတ်ပါ။ နောက်ပြန်သပိတ်မဟုတ်။ ဒီလိုသပိတ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် စာဖတ်နေသူများ တကယ်ပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်နေလား အဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကချင်လူမျိုးများဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဖက်ဒရယ် ပုံစံ နယ်စားငယ်များ အတူ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခဲ့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်
at 11/25/2012 11:34:00 AM
ကချင်လူမျိုးများဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဖက်ဒရယ် ပုံစံ နယ်စားငယ်များ အတူ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခဲ့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ တနယ်နဲ့ တနယ် တောထဲက သားငါးကအစ ပိုင်ဆိုင်မှုများ လေးစားခဲ့ကြသလို၊ မဟုတ်မမှန်လုပ်လာလျှင် မဟာမိတ်ဖွဲ့ စစ်ခင်းခဲ့ကြပေမယ့်၊ တိုင်းတပါးသား ၀င်လာလျှင် အားလုံး အတူတူဝိုင်းတိုက်လေ့ရှိသည်။
အခုထိ ကချင်ပြည်မြောက်ပိုင်း အခု ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၁) နယ်မြေသည် ဘယ်လူမျိုးလက်အောက်မှ မကျဖူးပါ။
ထိုဒေသများ မှာ နာမည် ကြီးခဲ့သော ဒူဝါများမှာ Hting Nan Duwa, Bawmwang Duwa, Ngalang Duwa, Hkumboi Duwa, Kadaw Lahtaw Duwa, Karing Duwa, Shadan Duwa, Lahpai Duwa, Gumshun Duwa, Tsum Hka Duwa, Hkalen Duwa, နဲ့ တခြား နာမည် အများအပြားလဲ ရှိခဲ့သည်။ (မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ မထည့်ထားပါ)
ထိုနယ်မြေသည် အင်္ဂလိပ်၊ လက်ထက်တွင်လဲ မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဂျပန်ခေတ်တော့ လုံးဝကို မရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဂျပန် ၀င်ဝင် ချင်း ကချင်လူမျိုးများ တောက်လျှောက် ခုခံ နေခဲ့သော နယ်မြေဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း အမေရိကန်များ အကူအညီကြောင့် တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကချင်လူမျိုးများသာ ဘိုးဘေး ခေတ်ကတည်းက နေထိုင်လာသော နယ်မြေဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်အောက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ နှင့်ရောနှော နေခဲ့သော်လည်း၊ ကချင် ဒူဝါ များ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော နယ်များ ဖြစ်သည်။
ဖုန်ကန်ဒူဝါ၊ Ga Hkyeng Duwa, Sama Duwa, Lajawn Duwa, တို့ ဆိုသည်မှာ ကချင်ပြည်အောက်ပိုင်း မှ ဒူဝါ များဖြစ်သည်။ ဖါးကန့်ဒေသတွင် ကံဆီးဒူဝါ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
အောက်ပိုင်း ဒူဝါများမှာ မြန်မာ ဘုရင်များ နှင့် အထိအတွေ့ အများဆုံး ဒူဝါများ ဆိုလျှင် မမှားပေ။ သို့သော် မြန်မာ ဘုရင် လက်အောက် ခံ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ မဟာမိတ် ပုံစံသာ ဆက်ဆံခဲ့သည်။
အာသံ နယ်သို့ စစ်ချီသော အခါ၊ မြန်မာ ဘုရင် အမိန့်ပေးလို့ မဟုတ်၊ နယ်စပ် ထိစပ် နေသောကြောင့် စစ်ကူ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
— with L Jasen Debu and5others.
မပြော မဖြစ်တော့လို့ ပါ
at 11/25/2012 11:24:00 AM
မပြော မဖြစ်တော့လို့ ပါ ၊
သေသေချာချာစဉ်းစားကြပါစို့ ၊ ဒီနေ့ငါတို့နိုင်ငံ သမ္မတကြီးက ဦးသိန်းစိန်
သမ္မတသက်တမ်း ( ၂ ) နှစ်ဘဲကျန်တော့တယ် ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ???
ကျေးဇူးမတင်ခြင်နေပါ ကျေးဇူးမကမ်းကြပါနဲ့ ၊ အတင်းပြောနေမဲ့အစား
ပေးသင့်တယ် ။ ( ၂၀၁၅ ) သမ္မတ ဘယ်သူ့ ကိုရွေးကောက်မှာလဲ ???
စဉ်းစားထားပြီလား ? တွေ့ထားပြီလား ? ရှာကောရှာထားကြပြီလား ?
( ၁ ) - မင်းကိုနိုင် ( မပိုင်သေးဘူး ) ။
( ၂ ) - ကိုကိုကြီး ( မဖြစ်နိုင်ဘူး ) ။
( ၃ ) - အမေဒေါ်စု ( ပိတ်ပင်တားစည်းမှု အနှောက်ယှက်ပေးကြအုံးမှာဘဲ )
( ၄ ) - ဦးဝင်းတင် ( အသက် ) ။
( ၅ ) - ဦးတင်ဦး ( အသက် ) ။
( ၆ ) - စစ်ဘက်က ( ပြည်သူလူထုလက်မခံတော့ဘူး ) ။?????
at 11/25/2012 11:13:00 AM
by/ face book
ကျွန်တော်တို့ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ရပ်ပေးလိုက်ရတာ
တရုတ်က လျှော်ကြေးမပြောသေးလို့၊ ဒေါ်လာသန်း
သုံးထောင် အလျှော်ပေးရမယ်၊ မြစ်ဆုံးစီမံကိန်းက
အပေါ်မှာသာ ဘာမှမရှိတာ၊ အောက်မှာ ဖောင်ဒေးရှင်း
တွေ လုပ်တာ အများကြီးပဲ၊ ခုလက်ထိ တရုတ်က
တရုတ်ကိုလည်း တပည့်တော်တို့က ကြောက်ရတယ်
(၁) ၁၉၈၈ခုနှစ် တိုင်းပြည်ပျက်တဲ့အခါမှာ တပည့်တော်
တို့ စားစရာမရှိဘူး၊ တရုတ်ဆီကနေ မှုဆယ် လမ်းကြောင်း
ကနေ သွင်းရတယ်၊ မှုဆယ်လမ်းကြောင်းက သွင်းရလို့
တပည့်တော်တို့ အသက်ဆက်လို့ရတာ၊ အဲဒီကျေးဇူးလေး
တော့ သူ့ကို ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်ရမယ်။
(၂) နယ်စပ်မှာ ထကြွသောင်းကြမ်းတဲ့ ဗ.က.ပ ဆိုတာရှိ
တယ်၊ အဲဒါ တရုတ်ပြည်ကနေ ထောက်ပံ့ထားတာ၊ ဆန်
တွေ၊ ပါတ်ဆံတွေ၊ အကုန်လုံးထောက်ပံတာပေါ့၊ ဗ.က.ပ
ဖြစ်ဖျားဒေသတိုင်း ဆိုပြီးတော့ အင်းတော်၊ ဘမောက်၊
ကောလင်း၊ ဗမှုဆိုပြီးတော့ အဲဒီဒေသကို ၀င်လာတယ်၊
နောက်ဒုတိယ လမ်းကြောင်းက မသုံးလုံး မိတ္ထီလာ၊ မြင်းခြံ
နယ်မြေထိဝင်ပြီး အင်တော၊ ကျောက်ဖြူထိ ရောက်တာပေါ့။
အခု ရဲရွာရေအားနား အင်တော၊ ကျောက်ဂှုထိရောက်
တာပေါ့၊ တတိယလမ်းကြောင်းက ပျဉ်းမနာ၊ တပ်ကုန်း
ရှေ့ခြမ်းထိရောက်လာတာပေါ့၊ အဲတော့ ဒီအဖွဲ့တွေအား
လုံးကို လိုက်တိုက်နေရတဲ့ အခါမှာ တိုင်းပြည်ရဲ စီးပွားရေး
အဲတော့ တရုတ်အစိုးရထောက်ပံ့ထားလို့၊ တိန့်ရှောက်ဖိန်
အစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာ ဒီထောက်ပံ့မှုတွေ အကုန်ဖြတ်
လိုက်တဲ့အခါကျတော့၊ ဗ.က.ပ ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်၊
ဒါကြောင့် တရုတ်နဲ့လည်း ရန်မဖြစ်ရဲဘူး၊ ဒါ စိတ်ထဲမှာပဲ
ထား၊ ဘာမှ ဟိုဒင်းမဖြစ်နဲ့။
အကယ်၍ တရုတ်နဲ့ စိတ်ဆိုးသွားခဲ့လို့ရှိရင် အကယ်၍ နယ်
စပ်ဒေသတွေမှာ အဲလိုပြန်ပြီးတော့ ဟိုကနေထောက်ပံ့၊
ဒီကနေထောက်ပံ့၊ တပည့်တော်တို့ကနေ စီးပွားရေး လုပ်ဖို့
ကို နောက်ကိုပြန် လှည့်ကြည့်နေရဦးမယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ မြစ်ဆုံးစီမံကိန်းတောင်
တရုတ်အစိုးရက တော်တော် စိတ်ဆိုးနေတယ်၊ ဒီဥစ္စာကို
လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပြည်သူများ၏ အကြိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသူများအား သံဃာတော်များက တောင်းပန် .
at 11/25/2012 11:05:00 AM
လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပြည်သူများ၏ အကြိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသူများအား သံဃာတော်များက တောင်းပန် . . .
ဦးသန်းရွှေ၏ ဆိုးကြိုးများသည် နိုင်ငံတော်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ရုံမက . . . ဘာသာတရားကိုပါ ပြောင်းပြန်လှန်ခဲ့ပြီလော . . .
Moe Min Oo
I ama100% Kachin, Christian but I shed tears whe...
Watch this video to “Jingle Bell Rock” with Hot Ch...
တကယ်တော့ မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းမှာလဲ ကေအိုင်အိုလို ...
At LSE forum, when asked byaKachin Student why s...
President Thein Sein's Troops burned and destroyed...
ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် မျှင့်တင်ဘို့ နေပြည်တော် အနီးမ...
The continuing cold reality of Burma’s Kachin conf...
မနေ့ တစ်နေ့ ကအထိ တိုင်းပြည်အာဏာစိုးပြီး တိုင်းပြည်...
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ် စခန်...
Milla Dawt Hniang ( Chin myushayi sha yu ngwi ning...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအထွေထွေသပိတ်တစ်ခု...
ကချင်လူမျိုးများဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဖက်ဒရယ် ပုံစံ နယ...
လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပြည်သူများ၏ အြ...
CNN Kachin new (Video)
sumprat kaba masum
Nawng E Hku Chyeju Dum Poi,
ANHTE A AWNG PADANG YEHOWA KARAI KASANG.(video son...
Kraw Madai Nsen
Laksan Shaman Chyeju
Wahpu Sumri Ren
Obamaamanu dan ga si ni
Myanmar State Television STOPPED it's simultaneous...
DVB TV News ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ...
DVB TV News ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အိုဘားမား မီဒီယ...
Yawn Hkyen Myiprwi
အနာဂတျ ပြောကျနတေဲ့သူတှကေို ဖွညျ့ဆညျးခငျြသူ
Yangon, Myanmar Police search vehicles bribery -实拍...
U ko ko hlaing & U Aung Htoo Interview
NU SHA BRANG DUT
ိရေတပ်အရာရှိကြီး ဗိုလ်စန်းမောင်ရဲ့သား ပညာတတ် တစ်ယေ...
Nanghpam lusha ninghkap masing (KBC)
KACHIN - Still on the Run (click on video link)
Tsawra ai Na Kawng Hpyen Koi Yen Dabang,
Buga Marit N wai
Bai Wa Na
Garai n matsing ai i
မန္တလေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက မြို့တချို့မှာ ငလျင်လ...
DUWA KachinaBlogspot mai yu sai
Don't forget to pay your Taxs
JIC Ga shagawp 3
တကမ္ဘာလုံးများရှိတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကို သတိေ...
ကချင်ပြည်နယ်ဟာ ဗမာတွေသနားလို့ ပေးထားတာ ဆိုသူတွေ ...
copy by facebook
ရခိုင်အရေးဟာ အစိုးရ ရဲ့ လတ်တလော ပြဿနာ ဖြေရှင်ရေးအတ...
WHO KILL AUNG SAN???